Galmudug oo ka hadashay cidda ka dambeysay dilka nabadoonada lagu dilay Caabudwaaq (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Galmudug oo ka hadashay cidda ka dambeysay dilka nabadoonada lagu dilay Caabudwaaq (DHAGEYSO)
Maamulka Galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dilka laba nabadoono oo gelinkii dambe shalay loogu geystay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ay ka dambeeyeen maamulada Puntland iyo Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Gudoomiyaha magaalada Caabudwaaq ee maamulka Galmudug Mahad Cumar Cilmi oo wareysi siiyay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay weerarkii lagu dilay nabadoonada Caabudwaaq in laga soo abaabulay Puntland iyo Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Wuxuu gudoomiyaha sheegay labada nabadoon iyo dadkii kale ee la dhaawacay uu ahaa mid lagu carqaladeynaayo xasiloonida iyo daganaanshaha deegaanadda uu ka arimiyo maamulka Galmudug, isagoona dhinaca kale tilmaamay in Galmudug ay arrintaasi ka bixin doonto jawaab deg deg ah.
Shalay gelinkii dambe ayaa kooxo hubeysan waxay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ku dileen 2 nabadoono, iyagoona sidoo kale dhaawacay 9-ruux kale oo labo kamid ah ay yihiin nabadoono iyo saddex kale oo dumar ah.
Inkastoo dilka nabadoonadaasi la sheegay inuu salka ku haayo aano qabiil ayaa hadane maamulka Puntland iyo Ismaamulka Soomaalida Itoobiya weli aysan ka hadlin eedeeymaha loo jeediyay, waxayna taasi keeni kartaa shaki ah in warka uu sheegayo gudoomiyaha uu run yahay.
Dhinaca kale, magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa weli waxaa ka taagan xiisad kacsanaan ah, inkastoo waxgaradka magaaladaasi ay isku dayayaan inay qaboojiyaan xiisadda halkaasi ka taagan, waxaana saakay aad u yar dhaq-dhaqaaqa ganacsi iyo dadweynaha ee halkaasi ka jiray.
Si kastaba ha ahaatee, nabadoonada la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Aadan Jaamac Axmed (Aadan Dhooley) iyo Maxamed Barre Diini oo si weyn loogu yaqaanay gudaha magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana la dilay xilli ay ku sugnaayeen goob maqaayad ah oo ku taalo magaaladaas.